Waraaqaha Android | Waraaqaha loogu talagalay Android | Androidsis
Habee aad Android sida ugu fiican Warqado-dhaqameed loogu talagalay moobilka iyo waraaqaha loogu talagalay Android. Shaashaduhu waa mid ka mid ah waxyaabaha shakhsiyadeed ee ugu caansan Android-kaaga waxayna u adeegaan inay muujiyaan hiwaayadahaaga, dhadhankaaga ama ay si toos ah u muujiyaan sawirka kuwa aad jeceshahay. Haddii waxa aad ka raadineyso gidaarka 'Android wallpaper' sida ugu macquulsan, halkan waxaan ku tusaynaa inbadan oo ay abaabuleen qaybaha.
1 Soo dejiso waraaqaha sawirada ee Android
2 Sida loogu shaqsiyeeyo moobilkaaga waraaqaha sawirada ee Android
3 Sida loo beddelo sawirka gidaarka Android
4 Qaab kale oo lagu beddelo waraaqda gidaarka ee 'Android'
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee Android
Waxaad ficil ahaan u galin kartaa sawir kasta oo ah gidaarka gidaarka. Dhibaatadu waxay tahay haddii aan sameyno baaritaanka internetka, way fududahay in la helo qaar badan oo ka mid ah cabirka ama u dhigma oo aan u soo bixin sidii aan filaynay. Haddii aadan rabin inaad waqti lumiso, marwalba waad fiirin kartaa boggayaga sawir-gacmeedka adoo booqanaya xiriiriyeyaasha soo socda:
Gunta 18: 9
Sooyaal caan ah oo caan ah
Sawirro midab leh
Sawirada kombiyuutarka iyo teknolojiyada
Sawirada muuqaalka muuqaalka
Dhammaan lacagaha lagu ururiyo degelkan waxaa iska leh qorayaashooda. Waan fahamsanahay in dhammaan sawirada lagu muujiyay androidsis.com Waxay ku yaalliin qaybta dadweynaha waxaana laga heli karaa internetka. Haddii kale, noo soo dir a email waana laga saari doonaa keydkeena macluumaadka sida ugu dhaqsaha badan si loo ixtiraamo xuquuqda lahaanshaha.
Sida loogu shaqsiyeeyo moobilkaaga waraaqaha sawirada ee Android
In kasta oo aaladdayada 'Android' ay la imaan karto gidaar aan wali jecel nahay, haddana waxay u badan tahay inaan rabno inaan adeegsanno asal shaqsiyeed ama mid ku habboon shakhsiyaddeenna. Waxa ugu horeeya ee aan sameeyo isla marka aan bilaabo aalad, ha noqoto kumbuyuutar, kiniin, moobiil ama nooc kasta oo qalab elektaroonik ah oo leh istcimaal isticmaalaha, waa inaan dhigo taariikh aan aad u jeclahay xitaa kumbuyuutarna waan ku sameeyaa beddel saacad kasta. Laakiin,sida loo badalo wallpaper gidaarka Android?
Iyada oo tirada noocyada kala duwan ee Android ay jirto, waxay ahaan laheyd wax aan macquul aheyn in lagu sharaxo habka saxda ah ee qalabka oo dhan, laakiin waxaan kuu sharxi karnaa oo aan ku dari karnaa shaashadda sida loo sameeyo Nexus 5 ee ku shaqeeya Android 6.0.1. Waxaan kuu sharxi doonaa dhowr siyaabood si taas loo sameeyo si loo hubiyo in qof kastaa beddeli karo gidaarka qalabkooda Android, midkoodna laba siyaabood oo kala duwan si loo daboolo noocyo badan oo qalab ah
Sida loo beddelo sawirka gidaarka Android
Nidaamku waa mid aad u fudud, laakiin waxaan ka warqabnaa in waxa u fudud dadka qaar ay xoogaa ka sii dhib badnaan karaan kuwa kale, marka waxaan sii wadaa faahfaahinta tallaabooyinka la raacayo:
Waxaan fureynaa Qalabka qalabka.
Waxaan tagnaa qaybta “Shaashadda”.
Shaashadda gudaheeda, waxaan galnaa «Waraaqda». Qalabka qaar, ikhtiyaarku wuxuu u muuqan karaa mid fudud "Asal".
Qaybta xigta waxaan kala dooran karnaa:
Raadi kaarka xusuusta.
Waraaqaha sawirka leh.
Waxaan galeynaa qeybta uu sawirka aan dooneyno inaan adeegsano noqon doono waana dooranay.
Kahor dejinta gidaarka cusub, waan tafatiri karnaa qiimayaasha qaarkood, sida jarista sawirka, ama wareejinta. Waxaan u tafatirnaa sida aan rabno.
Ugu dambeyntii, waan aqbalnaa.
Noocyada qaar ee Android, sida 4.4.2 Samsung TouchWiz, tallaabada 4aad ikhtiyaarka aan ku dooranno haddii aan dooneyno inaan ku dhejino shaashadda guriga, shaashadda qufulka ama labadaba si toos ah ayey u muuqan doonaan. Goor dambe ayaan awoodi doonnaa inaan tilmaamno halka laga soo qaadayo sawirka laga soo qaaday aaladda asalka ah ee sawirada leh, darbiyada ama gallerykeena. Inta soo hartay waxay lamid yihiin sida loo sharaxay.
Haddii aad soo degsatay sawir aad u ballaaran, halkan ayaan ku sharraxaynaa sida loo beddelo xallinta sawirka hab fudud.
Qaab kale oo lagu beddelo waraaqda gidaarka ee 'Android'
Waxaa jira a hab kale taas oo ah waxa ugu horeeya ee ay ila tahay inaad isku daydo iyadoon loo eegin nooca aaladda Android ee aad haysato. Waxay ku saabsan tahay adeegsiga toobiye: laga bilaabo cirifka ama codsi kasta oo kale (oo ay ku jiraan sahamiyaha faylka) oo kaydiya ama galaangal u leh sawirrada. Si aad ugu bedesho gidaarka gidaarka qaabkan kale waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan dul marineynaa sawirka aan dooneyno inaan ku qeexno inuu yahay gidaarka gidaarka, kaas oo geli karaya gariiradda, kamaradda, Sawirada Google ama meel kasta oo aan ku leenahay.
Waxaan fureynaa sawirka.
Waxaan riixnaa oo haynaa illaa aan ka aragno xulashooyinka jira.
Waxaan dooraneynaa «Set as ...».
Waxaan kala dooranaynaa xulashada la doonayo kuwa muuqda, sida:
Kaliya shaashadda guriga.
Kaliya shaashadda qufulka.
On shaashadda guriga iyo shaashadda qufulka.
Sidii habkii hore, wax ayaan ku saxi karnaa sawirka, sida dalaggiisa, ballaadhintiisa, iwm.
Ugu dambeyntiina, waxaan aqbalnaa isbeddelka.
Waa suurtagal in haddii aad haysato qalab xoogaa da 'weyn, riixista sawirka ilbiriqsi ma muujineyso wax xulasho ah. Hadday taasi tahay kiiskaaga, waa inaad ku beddelataa taabashadaas mid kale: taabo badhanka xulashooyinka qalabkaaga. Sidaad ogtahay, aalado badan oo Android ah waxay leeyihiin saddex badhan: badhanka ugu weyn ama bilowga, midka dib loogu noqdo iyo mid saddexaad oo aan taaban doonno si aan u tusno xulashooyinka la heli karo. Taasi waa badhanka ay tahay inaad taabato tallaabada 3 ee geeddi-socodkii hore.
Xagee laga helaa waraaqaha darbiga guurguura? Noosheeg kheyraadkaaga markay tahay soo degida waraaqaha sawirada iyo gelinta gidaarada cusub ee Android, mid ka mid ah ilaha ugu fudud uguna dhaqsaha badan si loo siiyo isbeddel muuqaal ah moobiilkeena ama kaniiniyadayada.